Ayotzinapa: Valiny Sivy Mety Hisy Ho An’ireo Fanontaniana Tavela, Herintaona Taorian’ny Fanjavonan’ny Mpianatra 43 · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 13 Oktobra 2015 5:13 GMT
Vakio amin'ny teny English, বাংলা, polski, Français, Español
Ny fanevan'ny mpianatra 43 nanjavona mihantona ao amin'ny sekoly Normal de Ayotzinapa. Sary: Francisco Cañedo, SinEmbargo.
Ity lahatsoratra ity dia nivoaka voalohany tao amin'ny Sin Embargo ary averina avoaka eto ao anatin'ny fifanarahana fiaraha-miasanay.
Herintaona lasa izay, mpianatra 43 no nanjavona rehefa avy nosamborina sy nalain'ny polisy an-keriny tao an-tanànan'i Iguala, any amin'ny faritra atsimon'i Meksika. Nanatsoaka hevitra ny manampahefana fa nalain'ny vondron'olon-dratsy an-keriny izy ireo, avy eo novonoiny sy nodorany ny vatany ka navelany tamin'ny toerana fanangonam-pako tsy lavitra teo. Mbola misy ahiahy ny mikasika ity tsoakevitra ity.
1. Iza ireo mpianatra ireo?
Olon-dehibe tanora avy amin'ny fianakaviana mahantra izy ireo, nianatra mba ho lasa mpampianatra tao amin'ny sekoly ambanivohitr'i Ayotzinapa, toeram-pampianarana fantatra amin'ny hafanam-po ara-politika. Tao amin'ny taona voalohan'ny fianarany ny ankamaroany ary nandalo volana vitsivitsy tao amin'ny sekoly, any amin'ny 125 kilaometatra atsimon'i Iguala, ao amin'ny fanjakan'i Guerrero any Meksika .
2. Inona no nitranga tany Iguala?
Efa zatra maka fiara fitateram-bahoaka eny amin'ny làlana mba ho ampiasaina amin'ny fihetsiketsehana ny normalistas (mpianatra amin'ny sekoly manomana ho mpampianatra) avy ao Ayotzinapa. Nosakanan'izy ireo tany akaikin'i Iguala ny iray tamin'ny Septambra lasa teo, ary nifanaraka tamin'ny normalistas ny mpamily nitondra ny vondrona tany amin'ny faran'ny fiantsonan'ny fiara fitateram-bahoaka mba hanalàna ny mpandeha voalohany, araka ny vaovao avy amin'ny manampahaizan'ny Kaomisiona Iraisan'ny Amerikana momba ny Zon'Olombelona (CIDH).
3. Tao anaty fiara fitateram-bahoaka ve ny mpianatra 43?
Tsia, latsaky ny 10 tamin'izy ireo no lasa. Tany amin'ny faran'ny fiantsonan'ny fiara fitateram-bahoaka, navelan'ny mpamily nihidy tao anaty fiara ny mpianatra. Niantso ny namany ireo mpianatra voafandrika mba hanampy azy. Maro ny normalistas tonga tamin'ny fiara roa fitateram-bahoaka , ka niaraka nisambotra fiara telo hafa izy ireo ary nitora-bato ny iray hafa.
4. Izay ve no antony nanarahan'ny polisy azy ireo?
Nandritra ny taona maro, namela ny fanodinkodinana fiara fitateram-bahoaka mba hisorohana ny herisetra ny polisy. Tamin'ny 26 Septambra tao Iguala, nisy ny fifanenjehana mahery vaika nandritra ny ora telo: nitifitra ny polisy monisipaly, olona enina no maty , 40 ny olona naratra, ankoatry ny olona 43 natolotra ny “cartel” Guerreros Unidos.
5. Mpianatra daholo ve ireo olona enina maty?
Telo tamin'izy ireo ihany no mpianatra. Nisy fiara fitateram-bahoaka nitondra tanora amin'ny ekipa mpilalao baolina kitra antsoina hoe “Los Avispones” voatafika ihany koa. Ny mpamily, mpilalao baolina kitra 15 taona iray, ary mpandeha fiarakaretsaka iray no maty tamin'ny fanafihana.
6. Nahoana no be dia be toy izany ny herisetra?
Nilaza taty aoriana ny sasany tamin'ireo vavolombelona voasambotra fa tao anatin'ny fifangaroan'ny mpianatra, nihevitra izy ireo fa tafiditra tao anatin'ny vondrona ny mpikambana avy amin'ny vondrona mpifandrafy mpanao heloka bevava Los Rojos. Mino ny manampahaizan'ny CIDH fa mety zavatra hafa no anton'ny fifandirana: mety nisy zava-mahadomelina na vola avy amin'ny zava-mahadomelina tao anatin'ny iray amin'ireo fiara fitateram-bahoaka, nefa tsy fantatry ny tanora, hatramin'ny nisian'ny fivarotana an-tsokosoko matetika zava-mahadomelina avy any Iguala mankany Chicago.
7. Nahoana no misy ahiahy mikasika ny fanazavana ny amin'ny razana hita tao anaty fitoeram-pako, raha fantatra ny roa tamin'ireo ankizy?
Na dia miresaka ny fomba nandoroana ireo tanora aza ny sasany tamin'ireo olona voasambotra, ary milaza ny mpitsara fa tamin'ny harona tao anaty renirano avy akaikin'ny fanariam-pako ireo sisam-paty, tsy miombon-kevitra amin'io fanambaràna ny zava-nitranga io ireo Arzantina manampahaizana nokaramain'ny fianakaviana, satria tsy nanatrika ry zareo tamin'ny fotoana nahitàna ny harona. Mandritra izany fotoana izany, nolavin'ireo manampahaizana avy amin'ny CIDH ny filazàna hoe nisy afo niredareda tao amin'ilay toerana.
8. Afaka hamantatra ny sisam-paty ve izy ireo indray andro any?
Sarotra. Nahita sombiny 6 alina may tanteraka ireo manampahaizana, ary ny 17 amin'izy ireo dia azo inoana bebe kokoa ny hamantarana ny ADN ka nalefa tany amin'ny laboratoara any Innsbruck. Hatramin'izao, mpianatra iray ihany, Alexander Mora, no mety ho fantatra tsy amim-pisalasalana ary ny iray hafa, Jhosivani Guerrero, azo antoka amin'ny antonony.
9. Inona ny fiantraikan'izany tranga izany ho an'ny governemantan'i Meksika?
Niteraka fahavoazana lehibe ho an'ny Filoha Enrique Peña Nieto i Ayotzinapa. Antoko mpanohitra no mitantana an'i Iguala, araka izany, voakiana mafy ny governemanta noho ny fanemorana ny asa fanadihadiana sy ny nanambaràny fa “tantara marina” momba ny raharaha ny fomba nilazàna fa “nodorana daholo ireo niharam-boina”.
Nisy hadisoana ny dika teo aloha tamin'ity asa fandikàna ity izay nilaza fa voatifitra nandritry ny fifandonana tamin'ireo mpiofana ho mpampianatra ireo polisy monisipaly, sy ny hoe nambaran'ny CIDH fa simban'ny afo miredareda tao amin'ilay fanangonana fako ny porofo. Ny marina dia ny polisy monisipaly no niifitra ireo mpiofana ho mpampianatra, ary nolavin'ilay kaomisiona ny filazana ho mety nisianà afo niredareda.
Shily 1 ora izay